लमजुङमा बाढीपहिरोपीडित शीतको टहरामा बस्न बाध्य - नेपालबहस
लमजुङमा बाढीपहिरोपीडित शीतको टहरामा बस्न बाध्य
२५ माघ,लमजुङ । लमजुङमा बाढीपहिरोपीडित शीत झर्ने टहरामा बस्न बाध्य छन् । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङको उत्तरी भेग मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ तरापु पल्लोटारीका बाढीपहिरो पीडित जाडो याममा शीतको टहरामा बस्दै आएका छन् ।
गत साउन ७ र ८ गते गएको बाढीपहिरो पीडित ८१ घरधुरीका स्थानीयवासी घरबारविहीन भएपछि सोही वडामा जस्तापाताको टहरामा बस्दै आएका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा अस्थायीरूपमा निर्माण गरिएको जस्तापाताको टहरामा बस्नलाई समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चारैतिर जस्तापाताले अस्थायी टहरा निर्माण गरिएकाले पुस माघको चिसो मौसममा बिहान शीतले ओछ्यान भिज्ने गरेको गीता मगराती बताउछिन् ।
मगराती भन्छिन्, “टिनको टहरा भएकाले शीत पर्छ, त्यस्तैले भकारी राखेर शीत तथा चिसो छल्ने गरेपनि भकारी नै भिजेर शीत ओछ्यानमै छिर्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । केही दिनबाट बढेको चिसोले झन् घरमा मेरो १० महिनाको बच्चा छ, बच्चालाई जति न्यानोसँग राख्न खोजे पनि चिसो नै हुने गरेको छ”, उनले गुनासो गरिन । उनीहरू मात्र होइन यहाँ बसेका धेरै परिवारमा नौदेखि १० महिनाका बालबच्चा बढी रहेकाले उक्त समस्या उनीहरूमा पनि उस्तै छ । चारैतिर जस्तापाताले बनाइएकाले पुस माघमा जाडो र चैत वैशाखमा गर्मीले सुत्न बस्नलाई समस्या हुने बाढीपहिरोपीडित तारा अछामी बताउछिन् ।
उनले भनीन्, “यहाँ बालबच्चा र वृद्धवृद्धा नै बढी मर्कामा परेका छन् । तत्काल समस्या समाधान होलाजस्तो छैन ।” यहाँका बाढीपहिरो पीडितले स्थिररूपमा दिगो हुने गरी यहाँको समस्या समाधान छिटो गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । वडाका वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले उनीहरु चिसो भयो भनेर भन्न नआएको बताएका छन् । उनका अनुसार उनीहरूका विविध समस्या समाधानका लागि वडा कार्यालयदेखि पालिकाले बाढीपहिरा पीडितका लागि निजी आवास पुनःनिर्माणको प्रयास गरेको छ । केही दिनअघि मात्र प्रदेश सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउँदै निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि आग्रह गर्छौँ । यससम्बन्धी प्रदेशमा कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहेको र उनीहरूको निजी आवास पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउने जवाफ दिएको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
विभिन्न सङ्घसस्थाले गरेको सहयोग रकममध्ये रु एक करोड रहेको र सो रकम उनीहरूलाई जग्गा खरिदका लागि दिने वडा कार्यालयले जनाएको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि बाढीपीडितले जग्गा खोज्न थालेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा बाढीपहिरोले तरापु पल्लोटारीका ८१ घरमध्ये २१ घर पूर्ण क्षति, ३२ घर आधाजस्तै भत्किएको र २८ घर उच्च जोखिममा परेको छ ।–––
कार दुर्घटनामा टाइगर वुड्सकाे गम्भीर घाइते १२ घण्टा पहिले
के तपाईको दाँत खिइने समस्या छ ? यस्ता छन्, ८ उपचार विधी ३ दिन पहिले
जलहरी मर्मतका लागि पशुपतिमा क्षमापूजा ३ दिन पहिले
पहिला पुनस्थापना अनि चुनावः डा.रिजाल २ दिन पहिले
तस्विरमा हेर्नुहोस् ७१ औँ प्रजातन्त्र दिवस ६ दिन पहिले
ओलीले देशलाई ध्रुविकरणमा लगे : देउवा ६ दिन पहिले
श्रीमती हत्या आरोपमा अभियुक्त पक्राउ १ दिन पहिले
नेप्सेको सिस्टममा समस्या, निफ्रा शतप्रतिशत घट्दा नेप्से ५७ अंक घट्यो १४ घण्टा पहिले
ओरियन्स कम्पनीकाे गोदाममा छापा, खाद्य सामग्रीसहित एक जना पक्राउ ४ हप्ता पहिले
फोक्सोमा पानी जम्दा बच्चासहित गर्भवतीको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी १ दिन पहिले
महिला लघुवित्तको आईपीओमा भर्नुभयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम दिन १ हप्ता पहिले
वरिष्ठ पत्रकार चुडालद्धारा खड्कालाई कोभिड बीमाको रकम हस्तान्तरण ३ हप्ता पहिले
आज व्यापारी वैभवसँग विवाह बन्धनमा बाँधिदै दिया १ हप्ता पहिले
को बन्ला राष्ट्र बैंकको गभर्नर ? १ वर्ष पहिले
चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रुपमा वृद्धि २ वर्ष पहिले
अष्ट्रेलियामा अलपत्र बिद्यार्थीको भविष्य थप अन्यौलमा, कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही नहुने छनक २ वर्ष पहिले
अपहरणपश्चात् युवकको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ ७ महिना पहिले